ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ခုတလော...
လာလည်သွားပါတယ်း) ညီမလည်းခါးသက်နေမိတာတွေတော်တော်များနေတယ်..း)
တဂ်ပို့စ်လေး ကြည်နူးစွာနဲ့ ဖတ်သွားတယ် မောင်မျိုးရေ.. တီတင့်လည်း ခရီးကပြန်ရောက်မှ ရေးဖြစ်တော့မယ်...
မောင်မျိုးကအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်တဲ့သူမို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ချီးကျူးသွားပါတယ် .. ၀ါသနာတူလို့ ဟိဟိ။
ွှTagစာလေး လာစား.. အဲ.. လာဖတ်သွားတယ် မောင်မျိုးရေ..။
Tag ပို့စ်တွေဖတ်ရတာ အညောင်းမိနေတဲ့ စိတ်တွေ ပေါ့ပါးလာစေတယ်။ စာရေးသူရဲ့ ရိုးသားတဲ့စိတ်အခံကို လှစ်ခနဲ ပြလိုက်သလိုပဲ..။
"တဂ်ပို့စ်တွေက ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းတယ်လို့ပြောတတ်ကြတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဆိုးသာမှ ဆိုးတော့ ကျနော်တို့ ပြန်မတွေးဖြစ်တာလေးတွေကို တဂ်ပို့်စ်လေးတွေက ပေးတယ်"
အမှန်ပဲ မောင်မျိုးရေ... ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိထားပြီး ပြန်ကြည့်ဖြစ်သွားလို့... အမလည်း ဒီ Tag ပိုစ့်လေးကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရေးဖြစ်တယ်...း-)
ဘာရေးရေး မယုံတော့တာကတော့ အသေအချာပဲ... :D
ခုတလော လေးကို တိတ်တိတ်ကလေး လာဖတ်သွားတယ်။
ဖတ်နေရင်း စာရေးသူတွေရဲ့ ခုတလောမှာ အမောတွေ များနေသလို ခံစားရတယ်..။
ကိုယ် လည်းအပါအ၀င် :D ။
ပစ်ပစ်..... ခါးသက်နေတဲ့အကြောင်းကတော့ ပြောကိုမပြောနေချင်တော့ဘူးဗျ ပစ်ပစ်လည်းကျနော့်လို အခါးနဲ့တည့်ပါစေဗျာ ။
ဆုမြတ်မိုး.. အခါးလေးတွေ လျော့ပါစေဗျာ ။
တီတင့်... ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချီးမွမ်းတာ များလို့ သူများတွေ အမြင်ကပ်နေအုံးမလားမသိး)
မမြသွေးး.... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မရေ ကျနော်က ရသ တွေ ဘာတွေမရေးတတ်လေတော့ ဒီလိုပဲ ရေးလိုက်တာပါပဲ ။
အစ်မသက်ဝေ ..ဟုတ်တယ် နောက်ဆို အဆင်သင့်ရင် တဂ်ပါအုံးး) ရေး၇တာပေါ့ဗျာ။
ကိုညိမ်းနိုင်.. မယုံလည်းနေပေါ့ ဟွင်းး
မသူသူဟန်..ဟုတ်တယ် မော စရာကြီးကိုဗျ။
မမိုး.... ကော်ပီကူးတယ်ပေါ့လေ မယုံတဲ့သူတွေထဲ သူလည်းပါတယ်ထင်တယ် ။
တစ်ချို့ စာပိုဒ်လေးတွေက ဖတ်ရတာ ကြည်နူးဖို့ ကောင်းတယ်.. တစ်ချို့နေရာလေးတွေကျတော့ ခါးသက်နေပြန်ရော.
စာအုပ်လေးဖတ်ပြီး ခြံလေးစိုက်စားတဲ့ စိတ်ကူးလေတော့ သဘောကျတယ်.
ဆွေလေးမွန်... ဟုတ်ကဲ့ဗျ အဝေးေ၇ာက်သူတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေက နီးစပ်တာများတယ်နော် ။ ကိုယ့်စိတ်ကူးလေးတွေ ဖြစ်လာဖို့တော့ ကျနော်တို့ကြိုးစားရမှာပါပဲ ။